Jack Wilshere ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ United Kingdom ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကစားသမားများ Jack Wilshere ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
United Kingdom ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; "စူပါဂျက်"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Jack Wilshere ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံနည်းနည်းလူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, တိုင်းမိမိအရည်အချင်းများအကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Jack Wilshere အတ္ထုပ္ပတ္တိအတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောသတ်မှတ်ထားသည်။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမပါဘဲ, Begin ပေးနိုင်ပါတယ်။
Jack Wilshere ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
ဂျက်အင်ဒရူး Garry Wilshere မိဘများကယ်ရီအသင်းဟာ (မိခင်) နှင့်အင်ဒရူးအသင်းဟာ (ဖခင်) က Stevenage, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်, ဇန်နဝါရီလ 1st, နှစ်သစ်ကူးနေ့၌ 1992 မွေးဖွားခဲ့သည်။
မိမိအပညာရေးနှုန်းအဖြစ်, ဂျက်သာမူလတန်းပညာရေးတက်ရောက်သည်။ သူကအားလုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘောလုံး၏ကောလိပ်မှအပေါ်ထပ်မံမရကိုပြု၏။ သူ့မိဘကသူ့ရွေးချယ်မှုလေးစား။ ဘောလုံးကစားသူသည်မိမိကျောင်းတွင်ရှိသူ၏အစောပိုင်းကာလအတွင်းမှာသင်ယူတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ခဲ့သည်။
သူ Hitchin, Hertfordshire အတွက်သူ့မိသားစုရဲ့ Semi-detach လုပ်လိုက်သောအိမ်မှာအနီးရှိပန်းခြံကစား, ဘောလုံးအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးစီးပွားထားရန်စတင်သောအခါအအသင်းဟာလေးဖြစ်ခဲ့သည်။
သူဟာလူငယ်အသင်းကို join ဖို့သိပ်ငယ်, ဒါကြောင့်သူကအသက်ငါးနှစ်ကနေကောင်လေးတွေကိုယူတဲ့သူ Knebworth လူငယ်ဘောလုံးအသင်း, တစ်ခုတည်းသောဒေသခံဘက်နှင့်အတူတစ်ဦး kickabout ရှိလိမ့်မယ်။
Jack Wilshere ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အလုပ်ရှာဖွေရေး Start ကို
သူသည်မိမိအပညာရေး furthering အတွက်မလိုအပ်မွငျသောကွောငျ့မိဘများရဟုဝန်ခံသော, Wilshere အသက်အရွယ်5မှာဘောလုံးကစားစတင်ခဲ့သည်။ ကစားနေစဉ်, မိမိအတောက်ပသောစွမ်းဆောင်ရည်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဘောလုံးကလပ်, Knebworth မှာဘောလုံးဆုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
Jack Wilshere ရဲ့ပထမဆုံးဘောလုံးဆု
သူကြီးပြင်းကဲ့သို့, မိမိစိတ်တွင်အခြားကစားသမားများ၏ကျန်ထံမှကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူကသူနဲ့သူ့အဖွဲ့ကအောင်မြင်မှုဆောင်ခဲ့သောစိတ်ပိုင်းအလွန်ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
Jack Wilshere ရဲ့အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး
အသက်အရွယ်ရှစ်မှာ, ဂျက်ကသူ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့တွန်းအားကိုဖန်ဆင်းသူကိုးဦး၏အသက်အရွယ်မှာအောက်တိုဘာလ 2001 အတွက်အာဆင်နယ်အကယ်ဒမီဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
Jack Wilshere သူအာဆင်နယ်အကယ်ဒမီပူးပေါင်းအဖြစ်
သူကရာထူးတဆင့်မြင့်တက်နှင့် 15 ၏အသက်အရွယ်မှာသူတို့ရဲ့အောက်မှာ-16s ၏ကပ္ပတိန်အမည်ရှိခဲ့သည်။ သူလည်းအောက်မှာ-18s များအတွက်အနည်းငယ်ပွဲလုပ်လေ၏။ အသင်းဟာ Arsenal အသင်းရဲ့လူငယ်စနစ်၏ထွက်လာမှအောင်မြင်သောကစားသမားတစ်ဦးသီးနှံအကြားဖြစ်ပါသည်။ ဝင်းဂါး Wilshere ဟာ 2008-09 ရာသီအတွက်အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးအသင်းကစားသမားအတွက်နေရာတစ်နေရာကိုပေး၏။
Jack Wilshere ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
Jack Wilshere ပျမ်းမျှမိသားစုနောက်ခံကနေလာပါတယ်။ ဖခင်အင်ဒရူးအာဆင်နယ်မိမိသားကိုကျေးဇူးတင် converting မတိုင်မီဟောင်းတစ်ဦး West Ham ပန်ကာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂျက်ရဲ့မိခင်ကယ်ရီ, 43, နေ့တဦးတည်းအနေဖြင့်အာဆင်နယ်အသင်းကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
Jack Wilshere Parents- ကယ်ရီနှင့်အနြေ္ဒ
အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်ကစားသမား Jack Wilshere တစ်ချိန်ကဖုန်းကို-in ကိုပေါ်ပေါ်သူ့မိဘ '' ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုပြန်ပေးဆွဲ ဘီဘီစီရေဒီယို5Live by tweeting into the show and asking when his washing would be done. This question was directed to his mother who always like to wash his clothes. In her words,
'' သူကအမြဲအနည်းဆုံးအဟောင်းအနှစ်စုံတွဲတစ်တွဲခဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူကစားခဲ့လူတိုင်း, သူတို့ရဲ့ဘက်မှာဂျက်လိုချင် '' ကယ်ရီကပြောပါတယ်။
'' သူကအမြဲတမ်းအနိုင်ရဖြစ်ချင်တယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ, အစ်ကိုနှင့်အစ်မနှင့်အတူ - - တောင်မှပတ်လည်ကန်စဉ်အတွင်းငါသည်သူတို့ကိုအကြားတိုက်ပွဲတွေလည်းအများကြီး diffuse ခဲ့ပါတယ်။ သူအကြောင်းဘောလုံးကိုကန်ငါ့အိမျ၌များစွာသောအဆင်တန်ဆာကိုဖဲ့။ '
ဂျက်သူအဖြစ်ဖော်ပြထားတယ်ဘယ်သူကိုအမည်ရှိမိန်းကလေးတစ်ဦး, Andriani မိုက်ကယ်နှင့်အတူဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ် "သူ၏အသက်တာ၏မေတ္တာ"
Andriani မိုက်ကယ်နဲ့ Jack Wilshere
သူတို့ဟာ 2015 ကတည်းကချိန်းတွေ့စတင်ခဲ့သည်။ Andriani သည်သူ၏ဆံ၏သမီးဖြစ်ပါသည်။ လောလောဆယ်သူတို့ပျော်ရွှင်စွာရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကုမ္ပဏီခံစားနေကြသည်။
အခမ်းအနားအပြီးတွင်အသင်းဟာ wrote: "စနေနေ့တွင်ငါသည်ငါ့အိပ်မက်ရဲ့အမြိုးသမီးမြားလက်ထပ်! လာ. နေ့ကဒါအထူးဖန်ဆင်းတော်မူသောလူတိုင်းအတွက်ရန်သင့်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ "
Andriani မိုက်ကယ်နဲ့ Jack Wilshere မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံ
သူတို့တွင်ခွဲခြာမဆိုနိမိတ်လက္ခဏာကိုမျှလည်းမရှိ။ သူတို့အများပြည်သူကျင်းပနိုင်ရန်လက်၌မြင်ကြသောအခါ၎င်းတို့၏မယုံနိုင်စရာ Bond အလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
Andriani မိုက်ကယ်နဲ့ Jack Wilshere ထုတ်လိုက်ပြီး
ဒီမီ, သူ Lauren Neal နဲ့ဆက်ဆံရေး၌ရှိ၏။ သူတို့ဟာ 2009 အတွက်ချိန်းတွေ့စတင်ခဲ့သည်။
Lauren Neal နဲ့ Jack Wilshere
အဆိုပါ lovebirds 2015 မှီတိုငျအောငျရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကုမ္ပဏီပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့စပ်လျဉ်းချောမွေ့သွားခဲ့ကြသည်ထိုအခါမူကား, အမှုအရာပြိုကွဲစတင်ခဲ့သည်။ ထိုသူတို့က 2015 အတွက်ကွဲကွာ။
အတူတူသူတို့ရဲ့အချိန်အတောအတွင်းသူတို့အတူတကွအမည်ရှိကလေးနှစ်ယောက်, Archi Jack Wilshere, ဒေလိလကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းအသင်းဟာရှိခဲ့ပါတယ်။
ဂျက်နှင့်သူ၏ kids- Archi Jack Wilshere, ဒေလိလကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းအသင်းဟာ။
Jack Wilshere ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိစ္စများ
ကပေါ်စကားပြောခြင်း, ဂျက် said: "ဒီဆေးလိပ်သောက်? သင်တန်း၏ကိုယ်ကနောင်တရ။ ငါကလုပ်နေတာမရောက်မီမြင်ကြပြီ။ ငါအမှားလုပ်နဲ့ကျွန်မနောက်တစ်ကြိမ်အမှားရာ၌ခန့်ထားပြီထို့နောက်ကဆိုသည်။ ပြည်သူ့အမှားတွေပါစေ။ ကျွန်မငယ်ရွယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုငါကနေလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။ ငါကရှိပါတယ်အကျိုးဆက်များနှင့်တက်ကြီးထွားလာလေးတွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနားလည်သဘောပေါက်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ငါသူတို့အဖေသောက်ထင်မှတက်ကြီးထွားလာပြီးဘောလုံးသမားဆေးလိပ်သောက်အပ်သည်မဟုတ်င်ကြောင့်, အဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်ချင်ကြပါဘူးလေးတွေရှိသည်။ ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးငါအကျိုးဆက်များကိုလက်ခံပါလိမ့်မယ်နဲ့ကျွန်မအပေါ်ရွှေ့မည်။
Jack Wilshere ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ရဲတပ်ဖွဲ့ကိစ္စများ
အသင်းဟာတစ်ဦးနှင့် ဆက်စပ်. 29 သြဂုတ်လ 2010 အပေါ်နံနက်အစောပိုင်းနာရီအတွင်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည် "fracas"သည့်ကြောင့်အသင်းဟာငွိမျး၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစားဒါစွဲချက်ရင်ဆိုင်ရမပြုခဲ့သော်လည်းသတိလက်ခံရရှိသည်ထင်ရှား။ ,
ဒါ့အပြင်မတ်လ 2011 အတွက်အသင်းဟာသူလည်းအရက်မူးခဲ့တာကြောင့်ယာဉ်မောင်းအိမ်မှာသူ့ကိုမောင်းထုတ်ဖို့ငြင်းဆန်ပြီးနောက်အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်စပါးတစ်ဦးထုပ်ဝတ်ဆင်ထားခံရဖို့ဖြစ်ပျက်သူတစ်ဦးတက္ကစီယာဉ်မောင်းပေါ်တွင်တံထွေးထွေးခြင်းအဘို့အရဲသတိပေးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
Jack Wilshere ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Pele တွေ့ဆုံ
Jack Wilshere သုံးခုအချိန်ကမ္ဘာ့ဖလားဆုရှင်အင်တာဗျူးဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသောခဲ့သည် Pele ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ၏ပစ်လွှတ်ပါတီအတွင်းမှာ 10Ten Talent:.
10Ten ခွက်တဆယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဘောလုံးသမားရဲ့အခွက်တဆယ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း, အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုပေါ်သူတို့ကိုလမ်းညွှန်နှင့်၎င်းတို့၏ရေရှည်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းများကို handpicking ထံအပ်နှံသည်။ ဂိမ်းထဲမှာ 10 အခန်းကဏ္ဍ: 10Ten အဆိုပါအဘယ်သူမျှမကစားကြသူဘောလုံးသမားများထံအပ်နှံသည်။ Pele နှင့်အသင်းဟာအဓိကအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများဖြစ်ကြသည်။
Jack Wilshere ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဒဏ်ရာအချက်အလက်
Wilshere 2011 အတွက်ကနဦးညာဘက်ခြေကျင်းဝတ်ဒဏ်ရာတှငျးမှပါပြီအရှိဆုံးအရာ၏ဒဏ်ရာနှင့်အတူတစ်ပူနွေးအချိန်ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့သည်။
အောက်တွင်အာဆင်နယ်အသင်းမှာ Wilshere ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုဒဏ်ရာအိပ်မက်ဆိုးများထိတ်လန့် infographic ဖြစ်ပါတယ်။
Jack Wilshere အတ္ထုပ္ပတ္တိ - အနာတရ infographics
Jack Wilshere ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Play ကို၏စတိုင်
Wilshere သည်သူ၏လှုပ်ရှားမှုရူပါရုံကို, သွားတာနဲ့ပေါင်းစပ်ကစား, အဖြစ်အစေးအပေါ်သူ၏ခေါင်းဆောင်မှုအတွက်လူသိများသည်။
သူတို့ကဖျောပွထားသထားပြီး Arsene Wenger ရှိခြင်းအဖြစ် "စပိန် technique ကို, ဒါပေမယ့်အင်္ဂလိပ်နှလုံး။ "
West Ham ဘောလုံးဒိုင်ယာရီ
Mason Holgate ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Japhet Tanganga ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Curtis ဂျုံးစ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Tariq Lamptey ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Phil Foden ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Brandon ဝီလျံကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
ယောဟနျသ Lundstram ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိများ
ပေါလ်စခိုးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ယော်ဒန်မြစ် Henderson ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ချာလီအော်စတင်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
အဲရစ် Dier ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်